ရှေ့ နောက်ဝဲယာ လွင့်လွင့်လူးလူးကျနေသော စနိုးလေးတွေက ကိုယ့်ကို ရှက်နိုးနိုးနှင့်ပွတ်ကာဝေ့ကာ...။
ချစ်ခြင်းနင့်နင့်ဖြင့် ခင်တွယ်စွာ ကြည့်နေရင်းပင်...ထက်အောက်မျက်တောင်မှာ တွဲခိုနေတဲ့ ကိုယ့်မျက်ရည်လေးတွေကို အေးခဲသွားအောင် ပြုနိုင်စွမ်းသည်ဘဲ....။
နှင်းရေ............................................ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ငါ့..ကိုထိတွေ့ ခွင့်ပေးပါ။။။
မြတ်နိုးစွာ ကိုင်တွယ်မိတဲ့ ..ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဖျား......မာနတွေမပါခဲ့ ပါဘူး...။
ဖြူစင်ခြင်းနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ...
ကိုယ့်ဆရာ ...မောင်သိန်းဇော်ကတော့ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူအလွမ်းဆိုပါလား.....။
အကို့ ကိုချစ်တယ်...အကို့ ကိုလွမ်းတယ်ဗျာ...။
ဒါပေမယ့် အကိုက ဆွတ်ဆွတ်ဖြူအလွမ်းတွေ ဖွဲ့ နေချိန်မှာ..ကျနော်က ဖြူစင်စွာ လွမ်းချင်နေမိတယ်..။
ကျနော် ဘယ်မှာရှာရမလဲ အကိုရေ..။
ကျနော့်ရဲ့စနိုးလေးတွေနဲ့ ဘဲ ဖြူစင်ခြင်းကို ရှာမယ် အကို..။
စနိုးလေးရေ...ငါရူးနေလားဟင်..။ မရူးပါဘူး ..မင်းသ်ိတယ်နော်..။
မင်းတို့ တွေ သိပ်ဖြူတာဘဲ..။
သက်မဲ့ မို့မနောစိတ်မငြိတွယ်ပါဘူး....မနောဖြူတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလဲ..။ ကိုယ်ကတော့ ဖြူတယ်ဘဲ နှင်းရေ..။
ရာသီစက်ဝန်း တပါတ်လည်တိုင်း မင်းရောက်လာပေးတာဘဲ.. ဒါပေမယ့် မင်း...တခုမှ မ၇ယူဘူးနော်...လူတွေ မျှော်ချိန်မှာ မင်းရောက်လာတယ်..အဖြူစင်ဆုံး...အနူးညံ့ဆုံးဘ၀နဲ့ ..။
သခင်ယေရှုကို လွမ်းဘို့ အတွက်..ခရစ်တော်ကို သတိရဘို့ အတွက် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ပို့အဖြစ်နဲ့မင်း ရောက်လာမြဲဘဲလေ။
လူတွေနဲ့ မင်းပျော်ရွှင်စွာ နေပေးတယ်.....။
တချို့ ကမင်းကို သိပ်ယုယတယ်...တချို့ က ခင်တွယ်တယ်..တချို့ ကမုန်းတယ်...
ကိုယ်သတိထားမိတာက ကိုင်တွယ် ဆော့ကစားရဖန်များတဲ့ အခါ မင်းကို နည်းနည်းတော့ ဥပေက္ခာပြုလာကြတယ်..။
ခရစ်စမတ်ရက်တွေမှာ မင်းမပါရင် ခြောက်သွေ့နေလို့ တမ်းတခဲ့ ကြပေမယ့်..ပွဲတော်ပြီးတဲ့ အခါ....
မင်းကို ငြီးငွေ့ လာကြတယ်...သွားရင်းလာရင်း မင်းကို စိတ်ထဲမှာ ငြူစူကြတယ်..။
မင်းလည်း လူတွေရဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ အချိန်အခါပြောင်းလာတော့ ပင်ကိုယ် ကနူးညံ့ပေမယ့် အနင်းခံဘ၀မှာ ဖြူစင်ခြင်းတွေ
ဝေးကွာပြီး... အရောင်တွေ စွန်းထင်းလာတယ်...
တဖြည်းဖြည်း မာကြောလာတာ..ကိုယ်သိတယ်...။ လူလို ပြောရရင်တော့ မျက်နှာမာ”လာတာပေါ့လေ..။
မခံနိုင်တဲ့ အဆုံး..မင်းဘ၀က အပူတွေများစွာနဲ့ ..မင်းအရည်ပျော်ခဲ့ တယ်...။
အရည်ဘ၀ကနေ ...မင်း....အငွေ့ အဖြစ်နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ အခါ...
အငွေ့ အဖြစ်နဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါ......။
နှင်းရေ.......။ ခဏပေါင်းများစွာ တွေ့ ခဲံ့ ကြပေမယ့်... ဟောဒီ ၂၀၁၀မှာ..မင်းက ကိုယ့်နှလုံးသားထဲကို အသိတရားတခု မှတ်မှတ်ယယ ထည့်ပေးခဲ့ တယ်...။
မင်းနဲ့ ကိုယ်..ဘ၀ခြင်းဆင်တူပေမယ့်.....မင်းက သက်မဲ့ ..ကိုယ်က သက်ရှိပါနှင်းရေ...။
မနှစ်က လာခဲ့ တဲ့ နှင်း မင်းဘဲ လားးးး.။
နောက်နှစ်လာမယ့်နှင်းက...အခု လာတဲ့ မင်းဘဲလားးးကိုယ်က မခွဲခြားနိုင်ဘူးနှင်း..။
ဘ၀ခြင်းတူပေမယ့် ကိုယ် ...တခုတော့ တမ်းတမိတယ်...နှင်းရယ်..။
ခဏ ခဏ ဇာတ်ပို့ ..
အ၇ည်ပျော်ခံနေရတဲ့ဘ၀များအတွက်... ကိုယ်တခုတော့ လိုချင်မိတယ်...နှင်း။
မင်းက သက်မဲ့ မို့မသိပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ထက်အောက် မျက်တောင်မှာ အေးခဲပြီး ကပ်တွယ်နေတဲ့ 
ကိုယ့်မျက်ရည်လေးတွေ သိပါတယ် နှင်းရယ်..။
နှင်းရေ... မင်းနဲ့ ကိုယ် သိပ်မကြာခင်မှာ ခွဲရဦးမယ်နော်... ကိုယ် မင်းကို မမေ့ ပါဘူးနှင်းရေ...။
အကြေကွဲဆုံး ၂၀၁၀မှာ မင်းက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရပ်တည်မှု ဘ၀ကို ပြပေးခဲ့ တဲ့ ဖြူစင်ခြင်း ဆရာပါ...။
ကိုယ်..မင်းကို ဖြူစင်ခြင်းတွေနဲ့ လွမ်းနေမှာပါ...။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:53 AM6comments:
ပြင်သစ်ညချမ်းဟာ ရင်နာခြင်းတွေ အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံလှပနေပေလိမ့်မယ်..။မပြည့်စုံခြင်လဲမပြည့်စုံပေဘူးပေါ့..။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ဘ၀ ထပ်တူမကျလေသမျှ အရာရာကအကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ...။
ရင်နာတဲ့ စုတ်ချက်တွေ ကိုယ်တွေ့ ၇တယ်။ဟန်ဆောင်စုတ်ချက်တွေလဲ ကိုယ်တွေ့ ရတယ်..။ဟန်ဆောင်လေသမျှကလဲ ဘ၀အတွက်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာမိတဲ့ ခဏ..စုတ်ချက်တိုင်းဟာလှပနေတာပါဘဲ..။
၀ယ်သူမကြိုက်မှာစိုးလို့ လက်တွန့် နေတာလား...။ အင်းးးးးး
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုတိုင်တောင်တောင် ပါတ်ဝန်းကျင်ဝေဖန်မှုတွေကြောက်လို့ လက်တွန့် နေခဲ့ရတဲ့ စုတ်ချက်တွေနဲ့ စာ၇င် ..
ခင်ဗျားတို့ ကတောင် အိနြေ္ဓထိန်းနိုင်သေးရဲ့ .။
ပါရီရဲ့ ညက ၀ိုင်နံ့ တွေသင်းနေသလားလို့ ..။ခပ်ညစ်ညစ်ရယ်လိုက်သံကို ကိုယ့်ဘေးက သူငယ်ချင်းကတော့ ကြားနေတာဘဲ..။
သူလဲရယ်နေတာပါဘဲ..။ ခပ်နာနာ ရင်ခုန်ချက်တွေနဲ့ ဆိုတာတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မပြောလဲ သိနေတာပါဘဲလေ..။
စီးကရက်တိုတွေပျံ့နေတဲ့ ပြင်သစ်လမ်းမတွေထက်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်းတောင်တွေးမိသေးတယ်...
ပါရီမှာနေရင်း သေမှလူသိခဲ့ တဲ့ မိုဒီလျှာနီးကို လွမ်းတယ်...။အားငယ်တတ်တဲ့ဗင်းဆင့်ကိုလွမ်းတယ်..။
မိုဒီလျှာနီးသေဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့ နောက် ချစ်တဲ့ မွေးကင်းစ ခလေးကိုထားခဲ့ ပြီး....
တိုက်ပေါ်ကခုန်ချပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခုန်ချအသေခံခဲ့ တဲ့ မီုဒီးရဲ့ ချစ်ဇနီးမိန်းကလေးကိုလွမ်းတယ်..။
ကိုယ့်ကို အဲသလောက်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးလေးရှိခဲရဲ့ လို့ လားလို့ လဲ ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ လက်ချိုးပြီးရေတွက်မိသေးတယ်..။
ဘာဘဲပြောပြောပါရီညကတော့ လူသိရှင်ကြားလှပနေသလို ..လူမသိသူမသိကြေကွဲနေတာတွေလဲ ရှိနေတာဘဲ..။
ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်...သို့ မဟုတ်..ချစ်ခြင်းလက်ဆောင်တွေပေးကြတိုင်း...နှင်းဆီပန်းတွေလှတဲ့ အကြောင်းပြောကြတိုင်း
နှင်းဆီတွေလှပအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ တဲ့ဥယာဉ်မှုးအကြောင်း တလုံးတလေမှ မဟခဲ့ ကြတဲ့ လူတွေအကြားမှာ...
ကိုယ်ကတော့ နွမ်းလျလျနဲ့ ပြုံးနေမိတာဘဲ..။
ဘာဘဲပြောပြောကိုယ်လဲ ပါရီလမ်းမတွေထက်က ..စီးကရက်တိုတစ်ကောင်ပါဘဲ..။
ဟောဒီကမ္ဘာကြီးမှာ လမ်းပေါ်ကစီးရက်တိုတွေ များသထက်များလာလေရဲ့ ...။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 3:30 PM2comments:
တိမ်ပြာတို့ လွင်းပါးမှုနဲ့ ...............
့ငြိမ့်ညောင်းခြင်းအတိပြီးသော ရင်ခွင်မှာ ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုးရဲ့ဂီတလင်္ကာကို
အချစ်၏ ချွေလင့်သော လက်ကို မထိတထိလှမ်းရင်း လွမ်းမောစေတဲ့ အရာ.....
့မက်မက်ရှိုက်ရှိုက် စွဲလန်းခဲ့ ပေမယ့်
မာယာပျားရည်တို့ လိမ်းကျံထားသော...နတ်ဆိုးရဲ့ တယောကြိုး..
မသိစိတ်အဟုန်နဲ့ ချစ်သူရနံ့ ကို ဖမ်းဆုပ်...ကမ်းပါးမှာပြုတ်ကျစေသောအရာ....
တွယ်တာစရာလို့ ဘဲထင်မှားစေတဲ့ ကဗျာ...။
တစ်ခါတစ်ခါ နေရာမရွေး ပေါက်ဖွားတတ်သော ဗိုင်းရပ်ကိုမှ ကိုယ်တွင်းနာအဖြစ် တယုတယ သိမ်းချင်မိစေတဲ့ အရာ...။
့ယုံကြည်မှု ဖောက်ဖျက်ရေးသခင်မရဲ့ လက်နက်ပုန်း..........။
မာယာနှုပ်ခမ်းကို တမ်းခြင်းတွေနဲ့သီဖွဲ့ စုပ်ယူစေသော ကျားကွက်..........။
တောင်ပြိုတိမ်ထုရဲ့ ကမ်းပါးမှာမှ ဇာပ၀ါနဲ့ ရစ်ပတ်လို့သိမ့်သိမ့်နင့်နင့် မျောလွင့်စေတတ်သော နတ်ဘုရားမရဲ့ လှိုင်းတံပိုးလေ...။
မထင်တဲ့ ဒေါင့်က ပုံရိပ်ထင်လာတတ်တာလဲ အချစ်...။
ထင်မှတ်ခဲ့ သော အရာ အားလုံးချုပ်ငြိမ်းစေတာလဲ ချစ်သူရဲ့ အချစ်ပေါ့...။
နှောင်ကြိုးတစ်ပင်လို လက်ခြင်းမြဲစေတာလဲ အချစ်.........................။
ရှိသမျှ ကြိုးမှန်သမျှ ဖြတ်တောက်လို့ အစိမ်းရောင်တွေ ကို ဖိတ်စာတစ်စောင်နဲ့ လူကြုံပါးတတ်တဲ့ မာယာသခင်ရဲ့ အပြုံး....
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မသိခင်ကတည်းက နတ်ပန်းဦးဆက်လို့ ရိုကျိုးရင်း ရင်ခတ် ခွက်ခွင်းသံတွေကြား ကကွက်များနဲ့ 
၀ပ်တွား အချစ်ဖုရားမ အလိုကျ ပေါ့...။
ကျိန်စာတွေ ပြည့်နေတဲ့ နှလုံးသားကျမ်း...
မကြောက်တမ်း ရူးစေတဲ့ အရာ...။
မြူပုဝါပါးတွေကြား မှာ မျှော်လင့်ရင်း စမ်းလျှောက် ဝေးဝေးကြီးရောက်မှ အဆိပ်ခိုးရယ်လို့ သိစေတဲ့ အရာ....။
ရိုင်းစိုင်းသောဝေါဟာရနဲ့မနှိုင်းသင့်တဲ့ အရာ...
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ လို့စုံလုံးကန်းယုံ ပုံမအပ်သင့်တဲ့ အရာ.....။
ကိုယ်ကလဲ သူများကို ဒါဏ်ချက်ပြင်းစေသော
ကိုယ့်ကိုလဲ တဖက်လူက ဒါဏ်ရာရစေသော....
စကားလုံးတွေ ကဗျာတွေအဖြစ် အန်ထွက်စေတတ်သော....အရာ။
ပြောလို့ သာ ပြောရတာပါလေ...
ကိုယ်ဘဲ ယုယပိုက်ထွေးပြီး ၊ ရင်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့ ...
ဘာရယ်လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဟောင်းလေးကို ပြန်သတိယလို့ ပါ။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 4:35 AM4comments:
တခါက...လို့ ဘဲ ပြောရမှာပါ..။
ခင်မင်ရတဲ့ မဆောင်းက မဒမ်ဆူးသီချင်းတွေ ပြန်နားထောင်ချင်တယ်..ဒါပေမယ့် နားထောင်လို့ ဖွင့်လို့ မရဘူးလို့ ပြောလာပါတယ်..။
ဘလော့ဂ်မှာ သီချင်းနားတင်လို့ ရအောင် ဘလော့ဂါ ကိုရန်အောင်ဆီက တက်ဂ်လေးယူပြီး သီချင်းပြန်တင်ရင်း..
တခါက အကြောင်းလေးကို တွေးမိတာပါ..။
ထိုင်းမှာနေလိုက် ၊ရွာမှာနေလိုက်..ရန်ကုန်တက်လို က် လုပ်နေတုန်းကပေါ့..။ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အချီကြီးအောင်ပွဲခံတဲ့ နေ့ အနေနဲ့ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်က “သည်ကရောင်း ”လို့ အမည်ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ်..။
ဘီယာတော့ နည်းနည်းသောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ နောက်ဒီလူတွေ နည်းနည်းပြဲလာတော့ အတင်းသီချင်းဆိုခိုင်းတာပါဘဲ..။
ကျနော်ကလဲ မဆိုချင်ဘူးငြင်း..မရပါဘူး..စားပွဲထိုးလေးကိုခေါ်ပြီး သီချင်းဆိုမယ်..ရလား မေးတော့..
အဲီးဆိုင်မှာ ပင်တိုင်တီးတာက ဒေါက်တာ အင်ဒရူးကောင်း။
ဒေါက်တာအင်ဒရူးကောင်းဆိုတာ အေးချမ်းမေတို့ဆောင်ဦးလှိုင်တို့ ကို တင်ပေးလို က်တဲ့ ဆရာ..။
ကျနော်ကလဲ မဆိုချင်တော့ ညစ်တာပါဘဲ..။ ဆရာအင်ဒရူးကောင်းနဲ့ မနီးစပ်ဘူးထင်တဲ့ သီချင်းတွေ ကို ခေါင်းစဉ်ပြောတာပေါ့..စားပွဲထိုးလေးက သွားမေး...။ ရ၏။
နောက်ဆုံး...ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တဲ့ “မောင့်မူပိုင်ရှင် ”ရုပ်ရှင် ကားထဲက “ မေတ္တာစေကျွန်”ဆိုမယ်လို့ ပြောလိုက်တာပေါ့..။
စားပွဲထိုးလေးက အားရ၀မ်းသာ လာပြန်ပြောတာပါဘဲ.. “ အဲဒီသီချင်းက ပိုအဆင်ပြေတယ်တဲ့ ”
ကျနော်ညပ်ပြီ..။ဘယ်လိုမှရှောင်လို့ မရတော့..ဂျော်ဒန်းနိုးလေးငိုက်စိုက်စောင်းပြီး စင်ပေါ်တက်၇တော့တာပေါ့..။
နောက်ဆရာနဲ့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကီးကိုညှိပြီး.. ဆိုတော့တာပေါ့..။
ထူးထူးခြားခြား ကောင်တာက ဆိုင်ပိုင်ရှင်က သီိချင်းကို စ၀င်လိုက်ကတည်းက ဆတ်ကနဲ နေအောင်လှည့်ကြည့်ပြီး လူတစ်ရပ်လောက်ရှိတဲ့ ပန်းကုန်းကြီးလာစွပ်တာပါဘဲ..။
နောက် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ပန်းကုန်းတွေစွပ်လိုက်ကြတာ...၁၀ကုန်းကျော်ပါတယ်..။
နောက်အောက်ကတခြားလူတေါ တောင်းဆိုလို့ ၃ပုဒ်ဆက်ဆိုခဲ့ ရသေးတယ်..။
သီချင်းဆိုပြီး ဆင်းကာနီးမှာ ဒေါ်က်တာကို ပန်းကုန်း၅ကုန်းနဲ့ ဆိုင်ကပင်တိုင်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပန်းကုန်းတကုန်းဆီ ဝေပေးလိုက်တာပါဘဲ..သူတို့ တော်တော် ပျော်ကြတယ်...ဒီပန်းကုန်းက သူတို့ အတွက်..အပိုငွေရမှာလေ..။
နောက်အောက်မှာဆက်ထိုင်နေတုန်း..စားပွဲထိုးလေးက “အကို့ကို ဆိုင်ရှင်က စကားပြောချင်ပါတယ်”ဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းပါတယ်..။
“အခု..ဘယ်မှာဆိုနေတာလဲပေါ့..ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီမှာ ပင်တိုင်ဆိုပေးပါ” ဆိုပြီး ဒေါက်တာကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်..။
ဒေါက်တာလို ဂီိတအနုပညာရှင်မျိုးနဲ့ နီးစပ်ရင် ဘယ်လှေကားထစ်တွေ ရှိတယ်..မြင့်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျနော်သိပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ငြင်းခဲ့ ပါတယ်..။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က သီချင်းတွေ ဆိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလေ..။
ကျနော့်ကို မျှော်နေတဲ့ မဒမ်ဆူးတို့ ရွာပါတ်ဝန်းကျင်က မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဘ၀ကို ရုန်းကန်နေရတဲ့ ..(၇)ရက် သားသမီးတွေ
၂လုးံ၃လုံး ဂဏန်းလေးတွေ ချပေးမယ့်...(..............)။
သူများဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့် အသိစိတ်ဓါတ်လေးလိုတယ်လေ...။
ဒီသီချင်းလေးက ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်သလို...ကျနော် ကျောခိုင်းလိုက်တဲ့ လှေကားထစ်လေးတခုမို့ပိုသတိရနေမိတယ်..။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 4:04 AM7comments:
ကျနော်က ငယ်ကတည်းက မိုက်ကယ်ကို တော်တော်စွဲလန်းသဘောကျတာပါ..။ ကိုယ်တိုင်စင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ
သူ့ စတိုင်သူ့ အကတွေက ကျနော့်ကို အများကြီးကူညီခဲ့ ပါတယ်..။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကျနော် မိုက်ကယ်ကို ချစ်နေတာဘဲ.။ သူ..ပြသနာတွေ တစ်လှေကြီးရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာလဲ အဝေးက မေတ္တာပို့ ပေးပြီး သူ့ ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်..။
ငယ်ကတည်းက စွဲလန်းခဲ့ ရတဲ့ မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာပါ..။
လန်ဒန်က စလို့ သူ့ ရှိုးပွဲတွေ ပြန်စတော့မယ်ဆိုတာကြားတော့ ၀မ်းသာမိတယ်..အားပေးချင်ခဲ့ တယ်..။
ဒါပေမယ့် ကျနော်အလုပ်ချိန်မှာ ကျနော့်တပည့်လေးက ဖုန်းဆက်လာတယ်..။ ဆရာ့ရဲ့ဆရာ ..ဆုံးသွားပြီတဲံ့...။ဘယ်လို မှတောင် အလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး..။
သားအဖတွေ ညဘက်စုံတော့ “ အဖေ..သမီးတို့ ကို မင်းသားဘ၀နဲ့ ရှာကျွေးခဲ့ တဲ့ အချိန်တွေမှာ..မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အကနဲ့ ဆုတွေ အများကြီးရခဲ့ ဘူးတယ်..သမီးတို့ စားခဲ့ တဲ့ ထမင်းလုပ်တွေမှာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေပါတယ်...ကျေးဇူးဆိုတာ
ပြန်ဆပ်ဘို့ ထက်..ကျေးဇူးတရားကို နားလည်သိတတ်ဘို့ က ပိုအရေးကြီးတယ်” လို့ပြောပြပြီး သားအဖတစ်တွေ နော်နော်ကအစ..ဘုရားစင်မှာရော အိမ်မှာပါ ဖယောင်းတိုင်မီးတွေ ထွန်းပြီး...ကောင်းမွန်ရာ ဘုံဘ၀ရောက်ဘို့ ဆုတောင်းခဲ့ ကြတယ်..။
ဒါပေမယ့် ထမင်းတောင်မစားနိုင်ဘူးဗျာ..။ အလွမ်းမပြေဘူး..။
တအိမ်လုံးလဲ ကွန်ပြူတာ ၄လုံး မိုက်ကယ်ရဲ့ သီချင်းတွေ ညံနေတာဘဲ..။
ကျနော်ကလဲ လူတစ်မျိုးလွမ်းပြီဆို ဘယ်သူ့ မျက်နှာမှ မထောက်ဘဲ ကို လွမ်းတတ်တာ..။
အဲဒီမှာ....ကျနော့်မျက်စိထဲမှာ နှာတံသေးသေးစင်းစင်းလေးတခုကို တွေ့ တာဘဲ။
မင်းးးမိုက်ကယ်၈ျက်ဆင်နဲ့ တူတယ်ကွ လို့ ပြောတော့...
“ ဘာမှမဆိုင်ဘူး အဝေးကြီးဘဲတဲ့ ”
ဒါဆို လက်တွေ့ ပြမယ်ဆိုပြီး အတင်းဆွဲခေါ်..၊ သူက ရုန်း ..နောက်ဆုံးချော့မော့ပြီး..မိတ်ကပ်ကို အသားရောင် လျှော့လိမ်း...
နှာတံကို ပိုထင်းအောင် ဖေါ်..။ နှုတ်ခမ်းနီကို နေရာချဲ့ ပြီးဆိုး...သမီးငယ်က ဆံပင်တွေ လိုချင်တဲ့ ပုံစံရအောင်လုပ်..။
နော်နော်က ဦးထုပ်ငှားပေးတယ်..။ သမီးကြီးဝယ်ထားတဲ့ မျက်မှန်တွေ အကုန်ချပြီး...တခုပြီးတခုတပ်ခိုင်း..။
နောက်ရယ်တဲ့ ပုံ...သူရယ်ပုံက ရိုးရိုးရယ်(ရီ)နေတာ..။
ကိုယ်က အမျိုးမျိုး ဖြဲရယ်ခိုင်း။အမျိုးတော်တော်များတယ်..ရယ်ပုံရယ်နည်းကို မိုက်ကယ်ရဲ့ ပုံတွေပြပြီး...ဖြဲစိစိရယ်ခိုင်း။
ဖြဲစပ်စပ်ရယ်ခိုင်း..သွားစေ့ ပြီး ဖြဲရယ်ခိုင်းနဲ့ ..။
ကြာတော့ သူ့ ပါးစပ်တွေ ညောင်းလာပြီးဆိုပြီး စိတ်တိုလာလို့ မနည်းချော့..။
နောက် မီးအလင်းအမှောင် ..မျက်နှာကျ..မိုက်ကယ်က ပါးချောင်ကျတယ်..သူက ပြည့်တယ်ဆိုတော့ ၄၅ဒီ၈ရီ စောင်းပြီးရယ်ခိုင်း..။
ပုံတော်တော်များများရိုက်ဖြစ်တယ်...တချို့စမ်းသပ်ရယ်တာကျင့်နေတဲ့ ပုံတွေဆို တော်တော် ရယ်ရပါတယ်..။
အဲဒီပုံတွေတော့ မတင်တော့ပါဘူး..သူစိတ်ကောက်မှာလဲ စိုး၇တယ်..။
အဖြေကတော့ သစ်နက်ဆူး မဟုတ်ရေးချမဟုတ်ပါ။ လုံးဝဥသုံ မဟုတ်ပါ..။
သူကတော့... ချစ်ရပါသော...မဒမ်ဂျက်ဆင်ဆူးပါ ခင်ဗျား..။
ဒီပဟေဠိ ဆိုတဲ့ ပို့ စ်ကို တင်ပြီး ကော်မန့် တွေ တက်လာမှ..မဒမ်ဆူးကို ခေါ်ပြလိုက်တာ..
.“ကိုယ်မပြောလားးးး... မင်းက မိုက်ကယ်ဂျက်တဆင်နဲ့ တူတယ်ဆို တာ..အခု ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကတောင် ..ပြောကုန်ကြပြီ”
ဆိုမှ မဒမ်ဆူးကြီး တခွိခွိနဲ့ သဘောတော်တွေ ကျနေလိုက်တာ...။
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဘဲ ထင်လို့ လားတော့ မသိပါဘူး...ပို့ စ်တင်ပြီး ကော်မန့် တွေ ခေါ်ပြပြီးတဲ့ နောက်မှ..
မဒမ်ဆူး ရယ်တာ အရင်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး...
Posted by သစ်နက်ဆူး at 2:47 AM 14 comments:
ဘယ်သူနဲ့ ဆင်လဲ..... ခင်မင်တယ်ဆို ဖြေကြည့်ပါ..နောက်ရက်မှာ အဖြေပေးမယ်..မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် ပုံတူတပုံ
photoshop နဲ့ ဆွဲပေးမယ်..။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 7:23 AM 14 comments:
အရင် ပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး..အပူဟပ်တာတွေ အပူကူးတာတွေ မဲပူကြီးဖြစ်တာတွေ ပေါ့ပါးစေဘို့ ..ဟိုတလောက ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ မှီငြမ်းပုံပါ..တရုပ်ပြည်က မပြည့်စုံတဲ့ မောင်နှမ၃ယောက်ရဲ့ ဘ၀လေးကို ခံစားမိလို့ ပါ..။
ရှားရဲမီး အပူဟပ်တာနဲ့ စာရင် နဲနဲ သက်သာမယ်ထင်ပါတယ်..။
ပေါက်ရဲ့ ဆီက အုန်းထမင်းနဲ့ ဂျိုးကင်စားရင်း ဒီိကလေး၃ယောက်ကို စိတ်ကူးလေးနဲ့ ကျွေးကြည့်ပေါ့..။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:37 AM9comments:
စာတွေမရေးဖြစ်ခဲ့ တာ..တော်တော်ပင်ကြာခဲ့ ပြီ..။
စိတ်ထဲမှာ မှုန်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ ပင်.။ တခါတရံဆိုတာထက် စိတ်က ကိုယ်မှီထိုင်နေကျ ထနောင်းပင်တွေကို သတိယနေမိတယ်..။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မပျော်တာတော့ သိနေတယ်..။
ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ ရတဲ့ ရှေးအမည်မသိစာဆိုရဲ့ ကဗျာလေးကို အထပ်ထပ် စိတ်နဲ့ ရွတ်ဆိုမိတာလဲ ခဏခဏ။
ငယ်တုန်းက ဆောင်းတွင်းမီးလှုံရင်းထိုကဗျာလေးကို သတိ၇တာနဲ့ မီးလှုံနေတဲ့ လက်တွေ ပြန်ရုပ်မိဘူးတာကို သတိရသည်..။
တောထဲသွားရင်း ရှားပင်တွေကို ကြည့်ပြီးကြေကွဲသလို ဖြစ်ဘူးခဲ့ သည်..။
အမှတ်ရဆုံးစာကြောင်းလေးကို ထပ်ခါထပ်ခါရွတ်ရင်း.. ကိုယ့်ရင်တွေ ပူရပါသည်..။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 12:28 PM 10 comments:
အနိုင်အရှုံးသတ်ပုတ်ရတဲ့ကွင်းပြင်တခုမဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး
မင်း ဘာကြောင့်များ သတ်ကွင်းတခုအဖြစ်ကျေငြာခဲ့ ရတာလဲ..။
နှလုံးသားထဲကပန်းတပွင့်ကို မန္တာန်တွေ မှုတ်ရင်း
ငါပျော်ရွှင်ခြင်းကို မြေသြဇာဖြစ်စေခဲ့ တယ်..
ဘာအတွက်ကြောင့် ဘာတွေမှားခဲ့ ရတာလေလဲ
သံယောဇဉ်စကားတွေ အထပ်ထပ်ရွတ်ခဲ့ ရတဲ့ ပန်း
(……….) ရေ..မင်းက နှင်းဆီပန်းမဟုတ်ဘဲ
ငါ့ကို ရစ်ပတ်ဆွဲယူ အသေသတ်မယ့် အသားစားပန်း
မန္တာန်မှားခဲ့ တဲ့ 
မှော်ဆရာ ဥယာဉ်မှုးရဲ့ နှလုံးသား
သူပျိူးတဲ့ ပန်းအတွက်ချစ်ခြင်းများနဲ့ အသေခံသွားလိမ့်မယ်။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 2:26 AM3comments:
လူသည် ဘ၀တခုကို စွဲလန်းခြင်းစိတ်ဖြင့် အရင်းခံကာ ဖြစ်တည်ကြသည်..။ မွေးဖွားခြင်းမတိုင်မှီက စတင် သန္ဓေတည်သော စွဲလန်းစိတ်သည်
( ဘုရား ၊ရဟန္တာမှ အပ) သေသည်အထိတိုင် ဖယ်ခွာဘို့ မလွယ်လှပေ။
ဘ၀ဘ၀များစွာက စွဲလန်းခြင်းကြောင့် ဘ၀များစွာကိုပင် ထပ်ဖြစ်စေသည်။ လောကုတ္တရာလမ်းအမြင်အရ ရုပ်နာမ်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာသော သတ္တ၀ါတိုင်း စွဲလန်းစိတ် မကင်းပေ..။
ထို့ ထက် ပိုသည်က လူ့ နယ်ပယ် သို့ ဝင်ရောက်လာပြီးသည့်နောက် ကျင်လည်ကြီးပြင်းရသော အသိုင်းအ၀န်းတွင် ရှေးရိုးစွဲလန်းမှုတို့ကိုထပ်မံသင်ယူရခြင်းပင်ဖြစ်သည်..။ နေမှု၊ထိုင်မှု၊ ပြောမှု၊ဆိုမှု
အပါအ၀င် ယုံကြည်မှုများကိုပါ ခေါက်ရိုးကျ လိုက်နာရတော့သည်…။
ထိုလိုက်နာသင်ယူရသော သဘောတရားတို့ သည်ပင်လျှင် အနီးအဝေး သဘောကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မျိုးကွဲ ငါးတစ်ကောင်ကို အခြားမျိုးမတူသော ငါးအုပ်ထဲသို့ ရောထည့်လိုက်သော်လည်း ထိုငါးသည် ဘ၀ ပြောင်းမသွားနိုင်ပေ။ ဥပမာ…ငါးခူတစ်ကောင်ကို ငါးသလောက်မွေးထားသော ကန်ထဲသို့ ထည့်လိုက်သော်လည်း ထိုငါးခူသည် ငါးသလောက်ဖြစ်မသွားပါ..။ သူ့ တွင် ကိုယ်ပိုင်အမူအရာ၊ ကိုယ်ပိုင်အရောင်အဆင်း ရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်..။ သို့ သော် သဘာဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် မူသေ
ရုပ်ဖြစ်တည်မှုအရ..သူသည် လုံးဝငြင်းမရသော ငါးစစ်စစ်တစ်ကောင်သာ ဖြစ်သည်။
ကျနော်သည် ငယ်ကတည်းက မိဘများနှင့်အတူနေရသော်လည်း ဝေးနေခဲ့ သည်..။
ကျနော် အကြိမ်တော်တော်များများ စဉ်းစားခဲ့ သည်..စဉ်းစားပြီးတိုင်းလည်း ကျနော်ပြုံးတတ်သည်။
ကျနော့်သား နောင်နောင်ကို မွေးကင်းစ ကတည်းက…ဥပမာ မမိုးချိုသင်း…သို့ မဟုတ်..ပေါက်…သို့ မဟုတ် မမခင်ဦးမေ၊ ပန်ဒို၊မသက်ဝေ….သူတို့ တွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ ၊ဇာတိလမ်းပြတ်၊ ဇာတိပျောက်ကျနော် ပေးခဲ့ လျှင်၊ နောင်နောင် ကြီးလာသောအခါ ကျနော့်ကို အဖေဟု သတ်မှတ်မည်မဟုတ် သလို၊ နာယူကြီးပြင်းမှုသဘောတရား၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ပုံ၊ နေထိုင်မှု စ၇ိုက်
တို့ သည် ကျနော်နှင့် လားလားမျှ တူမည်မဟုတ်ပေ..။
ဆိုလိုခြင်သည်က လူတစ်ယောက် ကြီးပြင်းရသော ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆိုးပေးလိုက်သော အရောင် သဘောကို ပြောလိုခြင်းပင်။
ကျနော်က ပုံစံခွက်ဆန်သော ဘ၀ကို မကြိုက်တတ်ပါ၊ သို့ ပေမယ့် စဉ်းစားခြင်းကိုတော့ ကြိုက်သည်။
ငါးတစ်ကောင် ဘ၀ပြောင်းမသွားသော်လည်း လူသည် စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သော သဘောနှင့် မသိမသာလေးညင်သာစွာကပ်ပါလာတတ်သော စွဲလန်းခြင်းကြောင့် ဘ၀တွေခြားနိုင်သည်..။
လမ်းတွေ ပြောင်းနိုင်သည်..။ ရပ်တည်မှုတွေ ပြောဆိုမှုတွေ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အထူးခြားဆုံးကား
ဘာသာရေးသဘောတရားတွေကို ကျနော်မပြောချင် ၊မရေးချင်သော်လည်း မိဘရင်ခွင်နှင့်
ဝေးခဲ့ ရသော ၊ဝေးနေဆဲဖြစ်သော ကျနော်ကတော့ ကျနော်ကြုံတွေ့ ရသော အကြောင်းအရာ၏
အ၇င်းခံ ကို ပြောမှရမည်။
မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် ၃တန်းအရွယ်လောက်ကဖြစ်သည်၊ အိမ်တောင်ဘက် မြက်ခင်းပြင်ကြီးထဲတွင် နွားတွေ မြက်စားနေသည်ကို ကြည့်ရင်း ကမ္ဘာကြီးသည် အပြားကြီး၊ အပေါ်က မိုးတိမ် အခုံးကြီးနှင့် အုပ်ထားခြင်း မဟုတ်ကြောင်းကို ဘယ်ကနေဘယ်လို စဉ်းစားလိုက်မိမှန်းကို မသိပါ..။
ဒါပေမယ့် ကျနော်သိလိုက်သော အကြောင်းအရာကို အိမ်သို့ ပြန်ပြေးလာပြိး အကိုအကြီးဆုံးကို
ကမ္ဘာကြီးသည် အပြားကြီး မဖြစ်နိုင်ကြောင်း နေ၀င် နေထွက်ခြင်းသည် အရှေ့ မှ ထွက်ပြီး အနောက်အရပ်သို့ ဝင်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာသည် လုံးကို လုံးရမည်။ အကယ်ရွေ့ အပြားကြီးကို အမိုးအုပ်ထားပါက ဒီနေ့ ..မနက် နေလုးံသည် အရှေ့ မှ ထွက်ပြီး အနောက်ကို ၀င်လျှင် နောက်နေ့ မနက်လင်းလျှင် နေ သည် အနောက်အရပ်မှပြန်ထွက်ကိုထွက်၇မည်..ယခု အနောက်က နေမထွက်ဘဲ အရှေ့ အ၇ပ်ကပင် နေပြန်ထွက်ခြင်းကြောင့် ၊ ကမ္ဘာကြီးသည် လုံးနေသည်ဟုပြောပြသောအခါ နဖူးကို လက်သီးနှင့် ခတ်ဆတ်ဆတ် ထိုးပြီးသည့်နောက် အဖေတို့ ကို သံတော်ဦးတင်ပြီးသကာလ တမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး တစ်မိသားစုလုံး ပြားနေသော ကမ္ဘာကြီးကို ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ ထူးထူးခြားခြား လုံးသောကြောင့် ညနေစာထမင်းလုံးဝမကျွေးဘဲ ထားလေသည်။
ကလေးတွေး ကလေးအသိနှင့် ကျနော်စဉ်းစားပြောဆိုလိုက်သော အလုံးအပြားဇာတ်လမ်းသည်
အနီးအဝေး၏ အစဟု ကျနော် ထိုစဉ်က မထင်ခဲ့ ပါ..။
ကျနော် ၄တန်း ကျောင်းသားအရွယ်တွင် အမေ့ ၏ဖခင် ကျနော့် အဘိုးဗလီကျောင်းတွင် ၀တ်ပြုအပြီး
စားသောက်မှုများအားလုံးပြီးသော အချိန်တွင် ကျောင်းသမံတလင်းပေါ်တွင် ပစ်ချထားခဲ့ သော ဌက်ပျောခွံကို နင်းပြီး ချော်လဲကျပြီး ဦးဏှောက်သွေးကြောပြတ်ကာ ဆုံးပါးခဲ့ သည်။ထိုစဉ်က ကျနော်မငိုပါ။
ငိုရမည်ဟု မသိပါ.။ မမ( အမ ၀မ်းကွဲ )လက်စွမ်းပြ လိမ်းပေးထားသော သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေးနှင့်
အိမ်ရှေ့ မှာထိုင်နေတုန်း မမအမျိုးသား ကိုချစ်ဆွေက “ညီညီ မင်းအဘိုးဆုံးတာ မင်းက မငိုဘဲနဲ့ သနပ်ခါးတွေလိမ်းပြီး လာထိုင်နေတယ်…ဖျက်လိုက်ဖျက်လိုက်” သူပြောမှ သနပ်ခါးဖျက်ရမည်ဆိုတာသိပြီး တံတွေးနှင့် ပွတ်သတ် ဖျက်လိုက်ရသည်..။
ဒါဆို……ဘာသာရေးနေ့ ကြီးများတွင် လှုဒါန်းသောသဘောဖြင့် နွားများကို သတ်ကာ အရပ်ဝေကြသည်။
မသတ်ဖြတ်မှီ နွားကို ပန်းတွေ ဆင်ပေးထားပြီး တိုင်မှာ ချည်ထားချိန်တွင် နွားများ မျက်ရည်ကျနေသည်ကို ကျနော်အများကြီိးတွေ့ ဘူးပါသည်။ ဆိတ်ကလေးတွေဆို လျှင် မျက်ရည်ကျရုံတင်မက အဆက်မပြတ် အော်နေတတ်သည်..။
“သေ”သောအခါ ငိုကြပြီး…“ သတ်” သောအခါ အဘယ်ကြောင့် မငိုသနည်း…
အသတ်ခံရသူတို့ ၏ မျက်ရည်ကို အဘယ်အကြောင်းအရာက မမြင်မတွေ့့နိုင်အောင် ကာဆီးထားသနည်း။
“တိရိစ္ဆာန်သတ္တ၀ါ၊တို့ သည် လူသားများစားရန် ……………………..မှ ဖန်ဆင်း ပေးထားသည် ဟူသော
စကားသည်..တဖက်သားကို မညှာတာရာရောက်သည်..မညီမျှဟု တွေးမိလိုက်သည်နှင့် မမယောင်္ကျားကို ကျနော် အမေကြီး( အဖေ့မိခင်) တို့ အိမ်သွားတော့မယ်ဟုပြောပြီး တခါတည်း ထထွက်ခဲ့ သည်.။
နောက်နေ့ မာမီ( ကျနော့်အမေ)နှင့် တွေ့ သောအခါ “မင်းမနေ့ က မင်း“သာသာ”(အဘိုး)မရပ်ဒ်( အသုဘ အခမ်းအနား)မှာတုန်းက ကပါရ်ဆန်(သချိင်္ုင်း) မှာ မတွေ့ ဘူး ..ဘယ်သွားနေလဲ ”ဟု မေးသောအခါ
“ အမေကြီးတို့ အိမ်မှာ ပန်းချီဆွဲနေတယ်” ဟု ပြောပြီးသောအခါ မာမီ ထပ်ငို လေသည်..။
မာမီငိုနေသည်ကို ကြည့်ပြီး ကျနော်စိတ်မကောင်းပါ..။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျနော်ပိုပြီး ဝေးခဲ့ လေပြီ..။
စာဖတ်အားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ ကျနော်သည် အိမ်မှာ သီးခြားအရောင် တစ်ရောင်ဖြစ်လာခဲ့ သည်..။
ဘယ်လိုမှ ရောစပ်မခံသော …ဆန့် ကျင်ဖက် အသွင်ဆောင်သည့် အရောင်ဖြစ်လာသောအခါ…..
ကျနော် မိဘရင်ခွင်နှင့် အဝေးကြီးဝေးခဲ့ ပေပြီ။
သမီးကြီး ၆နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းက ကျနော် ပန်းချီဆွဲခြင်း ခဏနားသည့်အချိန်တွင် သမီးနှင့် အတူဆော့သည်။ လက်ဝှေ့ ထိုးတမ်း နပန်းလုံးတန်း ကစားသည်၊ ပထမ သမီးကို အနိုင်ပေးပြီး ကိုယ်က အောက်ကဘဲနေပေးသည်..သူမောနေမှ ခြေတွေ လက်တွေကို ကိုယ်က ချူပ်ထားပြီး သူမရုန်းနိုင်ချိန်ဆို ကျနော်က သမီး မေးစေ့ လေးကို ကိုင်ပြီး…
“ ကိုင်း…ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ …ကိုယ့်လူ..”ဟု ပြုံးပြီးမေးလျှင်…
“ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး ဖေ့ဖေ ရယ်” ဟု သမီးက ပြောတတ်သည်။
ကျနော် ပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်စဉ်ကလည်း မိဘကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ဘူးပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တုန်းကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ပါသည်။ သို့ သော် ကျနော် မထောက်ပံ့လျှင်လည်း ဘာမှကို မှုစရာမလိုအောင် အဖေတို့ က စီးပွားရေးကောင်းပါသည်..။
ဥရောပ ရောက်ပြီိးသည့်နောက်တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ပစ္စည်းတွေပို့ ပေးပါသည်..။ ငွေကြေးလဲ
တော်တော်များများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ နာရီ၊ ကင်မရာ အမျိုးမျိုး ၀ယ်ပေးခဲ့ ရာက
အဖေက …ငါးမျှားတန် ကောင်းကောင်း ၀ယ်ပေးပါ..တဲ့..။
ငါးမျှားတန်က ဈေးမကြီးပါ….သို့ သော် ကျနော် ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ ဝယ်ရမှန်း မသိ။
ကွင်းဆက်တွေကို စဉ်းစားနေရင်း လက်တွန့် နေခဲ့သည်။ ငွေကိုသာ ခဏခဏ ပို့ ပြီး၊ ငါးမျှားတန်ကို မေ့ချင်ယောင်သော်လည်း အဖေကတော့ ခဏခဏ ထပ်မှာခဲ့ သည်..။
ကိုယ်တိုင် သူ့ အသက်သတ်ခြင်းသည် အကုသိုလ်အလုပ်ဟု စွဲလန်းနေစိတ်နှင့် ကြံရာပါဖြစ်မှာ
ကြောက်ပြီး မ၀ယ်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
“ မြစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်းမှ ဟိုမှာဘက်ကမ်းသို့ ဖောင်ကို အသုံးပြုပြီး ကူးခတ်သွားသူသည် တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ရောက်သောအခါ မိမိစီးနင်းလာသော ဖောင်ကို သယ်ယူပြီး ထမ်းသယ်သွားစရာမလို ပေ”။
ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ကိုသာ ကြည့်ရှုစေသော တရားသဘောကို နှလုံးသွင်းပြီး…………………………
သူငယ်ချင်း (ငါးမျှား ဆရာကြီး) အကူအညီဖြင့် ငါးမျှားတန် အကောင်းစား တလက် ၀ယ်ပို့ ပေးခဲ့လေသည်..။ ပို့ ပေြး့ပီးနောက် အဖေ့ဘက်ကလဲ ဘာမှ မပြော ကိုယ့်ဘက်ကလဲ ၀ယ်ပေးခဲ့သည့်
အဖြစ်ကို မေ့ နိုင်အောင် နေထိုင်ခဲ့ လေသည်..။
ငွေကိုတော့ ၂လတခါ အလုံးအရင်းနဲ့ ပို့ ပေးပြီး ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့ ပါသည်..။
ငါးမျှားတန်လေးကိုလဲ မေ့သလောက်ဖြစ်နေခဲ့ ပေပြီိ..။
ဲ ပြီးခဲ့တဲ့ တပါတ်နှစ်ပါတ်လောက်က မမက သူ့ တူမတွေနဲ့ သူ့ ယောင်းမအတွက် အမရပူရ ကြိုးကြီးချိတ်ထမီနဲ့ 
မေရှင် ရင်ဖုံးအကျီ င်္လေးတွေ ပို့ ပေးလာရင်း ပါလာသည့် စာတွေကို အားရပါးရဖတ်ရသည်…
အဖေ ရေးလိုက်သော စာလဲ ဖတ်ရပါသည်...............။
“ ညီညီရေ…မင်းပို့ ထားတဲ့ ငွေတွေကို စုစည်းထားပြီး အလုပ်တခု လုပ်ထားတယ်..အရင်က မပြောသေးတာက လုပ်ငန်းလဲ အကောင်အထည် မပြနိုင်သေးသလို…နောက် မင်းကိုလဲ ၀မ်းသာစေချင်
လို့ ပါ..မင်းပို့ ထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့အပါတို့၃ဧကကျယ်တဲ့ မြေနေရာဝယ်ပြီး ငါးမွေးမြူရေးကန် ၂ကန် လုပ်တယ်၊ နောက် မြေဧက ၁ဧက အကျယ်မှာက ငါးကန်တစ်ကန် သပ်သပ်တူးထားပြီး ငါးတွေ မွေးခဲ့ တာ။
အခု ငါးတွေ ဖော်တော့ ပိသာချိန် ၃၀၀၀ ကျော်လောက်ရတယ်..
လောလောဆယ် လက်ငင်းရငွေကတင် သိန်း ၄၀ ကျော်နေပြီိ…နောက်ထပ်ရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ငါးကန်ကိုလဲ ထပ်ချဲ့ ဦးမယ်ကွာ…
ဒါမင်းဝမ်းသာစေချင်လို့ အခုမှ ထုတ်ပြောတာကွ..။ မင်းလဲ ကျမ္မာရေးဂရုစိုက်ဦး………………………………
သမီးနဲ့ ဆော့ကစားရင်း ကျနော် မေးစဉ်က သမီးက ဖြေခဲ့ သည်…
ယခု ကျနော့်အဖေက ဘာမှ မမေးပါ..။
ကျနော့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း ပြုံးပြီး ဖြေနေပါသည်
ကမ္ဘာ အပြားကြီးပေါ်တွင် ကျနော့်အဖေက ငါးကန်ကြီးများတူးပြီး မွေးမြူရောင်းချရင်း ပျော်နေလေသည်..
ကမ္ဘာလုံးကြီး၏ အစွန်းတစ်ဖက်ဖျားက ကျနော်ကတော့ အနီးအဝေး သဘောကို တွေးရင်း ပြုံးပြုံးကြီးလုပ်နေသည်………………။ ။
။ ။.မည်သည့်ဘာသာကိုမျှစော်ကားလိုစိတ် ၊ မရှိပါ ၊ ကျနော်လက်ခံကျင့်ကြံနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထဲတွင်လဲ လူသတ် သမား၊သားသတ်သမားများစွာရှိပါသည်..။ ဘာသဘာရေးကို ပြောဆိုခြင်းထက် အယူအဆ မတူသော မိသားစုထဲက လူတစ်ယောက်၏ စိတ်အနီးအဝေးကို ပြောလိုချင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 2:45 PM 11 comments:
ရှင်ကွဲ (သို့ မဟုတ် ) လမ်းခွဲ
ဘာဘဲပြောပြော လမ်းခွဲကြပြီဆိုကတည်းက အရာအာလုံးသည် ပြီးဆုံးသွားပြီ.။
ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရာတွင် လက်တွဲဖော်…လက်တွဲဘက်အဖြစ် အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့ 
အခုချိန်မှာတော့ အရာအားလုံးသည် ပကတိ သူစိမ်းသက်သက်..။ သားသမီး ၃ယောက် ရှိလို့သမီးကြီးတောင် အသက်၂၀ ပြည့်ခဲ့ ပြီ..။
ကိုယ့်ရဲ့ ယတိပြတ်စကားကြောင့် သမီးရဲ့ အဖေ့ ပေါ်တွင် နားမလည်နိုင်သော ဝေခွဲရခက်သောမျက်နှာ။
မျက်လုံးကြည်ကြည်လေးနဲ့ ကိုယ့်ကို အခန်းထောင့်က ကြည့်နေသော သားလေးရဲ့ မျက်နှာ..။
ကိုယ်က အရာရာကို သံယောဇဉ်နဲ့ တွေးဆစဉ်းစားသူဖြစ်ပေမယ့်…
“ ရှင် ..တစ်ကယ်ပြတ်နိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့…” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပြုံးထေ့ထေ့ မျက်နှာကပင်
သားသမီး တွေမရခင်ကတည်းက လက်တွဲလာခဲ့ တဲ့ သူမ (မဒမ်ဆူး)နှုတ်က ဒီလိုစကားမျိုးထွက်လာမှတော့….။
ကိုယ်က သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ကြိုးစားနေထိုင်ခဲ့သည်..
သူမကို သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့ လေသမျှ ကိုယ်ကသာ အရှုံးဖြစ်ခဲ့ တာတွေ…။
သူမက အမြင် အသွင်လှပပေမယ့် သူမကြောင့် စကားဝိုင်းကနေ ထ”ထွက်ခဲ့ ရတာတွေ….
သူမကို ပါတ်ဝန်းကျင်ကတားမြစ်တဲ့ ကြားက ရဲရဲကြီး လက်တွဲပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ တာတွေ..
ဟိုတုန်းကတော့ သူမနဲ့ အတူ နှင်းပွင့်တွေ ကြား ဖြတ်သန်းဘူးသည်..
နှင်းငွေ့ တွေကြား ဖြတ်သွားဘူးသည်….မိုးစက်တွေကြား …နေပူကျဲကျဲ လက်တွဲဘူးသည်..။
ကိုယ်စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေချိန်တွေမှာ သူမက အားပေးဖေါ်ဖြစ်ခဲ့ ဘူးသည်
ကိုယ်အားငယ်ချိန်မှာ သူမက အားအင်တွေပေးဘူးသည်
ကိုယ့်စိတ်တွေ ထွေပြားရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာ သူမက လမ်းစလေးတွေ ချပြပေးဘူးသည်
ဒီကျေးဇူးတွေ ဒီိသံယောဇဉ်တွေနဲ့ ကိုယ်က သူမအပေါ် ပစ်ပစ်ကာကာ မလုပ်ရက်ပေမယ့်…
သူမရဲ့ဟန်ဆောင်ပြုံးတွေ….
အားအင်အဖြစ် လိမ်ညာခဲ့ တဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ…
အရာအားလုံးကို သေချာစေ့စေ့တွေးမှ သူမရဲ့ အပြုအမူ..သူမရဲ့ ပုံရိပ်တွေက လိမ်ရက်နိုင်သူကြီးအဖြစ် ကိုယ်သိလာရပြီ..။
သူမကြောင့် ကိုယ်ရင်မောခဲ့ ရတာတွေ…
သူမကြောင့် ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အသက်ရှုကျပ်ခဲ့ ၇တာတွေ…။
သိပေမယ့်…သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ စကားလေးက…ကိုယ့်ကို တွေဝေစေခဲ့ သည်…။
ကိုယ့်မာနနဲ့ သံယောဇဉ်ကို ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ ပွဲ..။ လှည့်မကြည့်တမ်း လမ်းခွဲတဲ့ ပွဲ..။
မနေ့ ညနေခင်းကတည်းက လမ်းခွဲခြင်းပြသနာက ကိုယ့်အိမ်မှာ စခဲ့ သည်..။
အစားကို အကုန်မစားတတ်ပေမယ့် စကားကိုတော့ ကိုယ်က အကုန်ပြောလိုက်ခဲ့ ပြီ..။
“ ငါ့မာနကို ထိလာရင်တော့ ငါက ဘွာမခတ်တတ်ဘူး…ပြတ်တယ်”
ကိုယ့်စကားကြောင့် ကိုယ့်အမျိုးသမီးမျက်နှာ တစ်ချက်ပျက်သွားသလို..
သမီးကြီးရဲ့ အံ့သြတဲ့ မျက်လုံးများ…မယုံနိုင်တဲ့ မျက်လုံးများ…( ပြောပြီးရင် မပြင်တတ်တဲ့ အဖေရဲ့ အကျင့်ကို
သိနေတဲ့ သမီးက တခွန်းမှ ၀င်မပြောပါ)
သူမကို ကိုယ့်ဦးနှောက်…ကိုယ့်နှလုံးသား..ကိုယ့်စိတ်ကူး…..အာလုံးထဲက ဆွဲထုတ် ပစ်လိုက်ပြီ။
အနှစ်၂၀ကျော် လက်တွဲ လာတဲ့ သံယောဇဉ်..ရင်က တစ်လှပ်လှပ်ခုန်သည်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကြည့်မိသော ကိုယ့်ရင်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းလျှလျှ…။
သားက အယင်ညတွေထက် ကိုယ့်နားကို ပိုတိုးကပ်ပြီးအိပ်သည်..
သူ့ အသိ သူ့ အရွယ် ငယ်ပေမယ့် ကိုယ့်အဖေရင်မှာ ဘယ်လိုခံစားပြီး အနေခက်နေမှာကို သူသိပါလိမ့် မည်။
အနက်မိုးလင်တော့ ကိုယ့်ဘေးနားမှ သူမ မရှိပါ..
မနေ့ ညနေက လမ်းခွဲဘို့ ပြောပြီးချိန်ကတည်းက သူမသည် အခါတိုင်းလို ကိုယ့်အနားမှာ မရှိပါ..။
ကိုယ်တော်တော် ခံစားရမှာဘဲလို့ …ထင်ထားခဲ့ သမျှ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် အံ့သြမိသည်..။
ကိုယ် သူမအတွက် ဘာမှ မခံစားရ…ဘာခံစားမှုမှ မဖြစ်။
အနှစ် ၂၀ ကျော် သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ စကားက ခုတော့ ရယ်မောစရာ..။
ညနေ ၄နာရီလောက်မှ သူမကို လှမ်းတွေ့ ရခိုက် သူမရဲ့ သံယောဇဉ် မျက်ဝန်းများနဲ့ အကြည့်ကို
တခါမှ မသိခဲ့ ဘူးသော လူတစ်ယောက်လို ကိုယ့်က မာနတရားနဲ့ ရင်းပြီး ပြုံးပြလိုက်သည်..။
ကိုယ့်တို့ လမ်းခွဲခဲ့ ပြီလေ..
ကိုယ့်တို့လမ်းခွဲခဲ့ ပြီ….
သြော်…..ခုတော့လဲ သက်ဆိုင်ခဲ့ သမျှ အရာအားလုံး အငွေ့ အဖြစ် လွင့်ပျယ်သွားခဲ့ ပြီဘဲ..။
သူငယ်ချင်းလိုဘဲ ဆက်လို့ခေါ်မည်ခိုင်လို့ လဲ ကိုယ်မပြော..
ယုံပါရင်သို့ တိုးဝှေ့ ဆဲပါခိုင်လို့ လဲ..ကိုယ်မပြောပါ..။
မင်းမကျေနပ်လို့တစ်ဖက်သတ်ရေးတယ်ထင်ရင်..မင်းဘက်ကလဲ လူတစ်ကာသိအောင် ချပြနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်
ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ထပ်ပြောချင်တယ်….သံယောဇဉ်ပြတ်…မေ့ ပစ်နိုင်တယ်။။
ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်…သမီးကြီး၊သမီးငယ်နဲ့ သားနောင်နောင်တို့ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..။
အင်းးးးး …..ဘာလို လိုနဲ့ အနှစ် ၂၀ကျော်သောက်လာတဲ့ ဆေးလိပ်ကို လမ်းခွဲပြီးဖြတ်လိုက်တာ ဒီနေ့ ဆို 5ရက်ရှိပြီ။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:31 AM 14 comments:
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)က ကိုယ့်အကြိုက်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ မှတ်မှတ်ယယ တက် ဂ်ထားတယ်..။
ကျနော်ကလဲ တော်တော် ကို ရေးချင်ပါတယ်…ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း၊ဟိုအလုပ် ဒီအလုပ်တွေ
နဲ့ ပတ်ချာလည်ရင်း ခုမှသာရေးဖြစ်တာ..။
ကိုယ့်အကြိုက်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က အမှတ်တမဲ့ ဆိုရင်တော့ လွယ်သလိုရှိပေမယ့် သူ့ ထဲမှာ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေက လေးနက်နေသလို..။
တစ်ဖက်သားရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို နားလည်ပေးနိုင်ခြင်းကို ကြိုက်တယ်…။
ကိုယ်တိုင်လဲ မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်စားချင်တယ်..မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စားထားရင်လဲ ကိုယ်က လေးစားတယ်..
( တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူးနော်)။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစားအစားတွေ ပြောပါဆိုရင်တော့…..
အုန်းထမင်း၊ဒန်ပေါက်၊ဆီထမင်း၊စမူဆာ၊ပလာတာ၊ရွှေကြည်ဆနွင်းမကင်း၊မုန့် ဆီကြော်၊မုန့် ပေါက်ကြော်၊
ပေါက်စီ၊ေ၇မုန့် ၊ မုန့် ပြားသလက်၊မုန့် အုပ်ကလေး( မုန့် လင်မယား)၊ဘိန်းမုန့် ၊ နန်းကြီးသုပ်၊ခေါက်ဆွဲသုပ်၊
သိပ်ကလေးဆန်သွားမှာစိုးလို့ဒီလောက်ဘဲ ရေးပြရတာကို ကြိုက်တယ်….။
သူများတွေ ရေးပြီး မေ့နေလောက်ချိန်မှ...ကိုယ်ကရေးလို့ ....တစ်ရေးနိုး ကိုယ့်အကြိုက်၊။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 8:05 AM7comments:
မောင့်ဂွက်ကိုရှာ ဆိုလို့ဘာ...ဘာသာစကားကြီးပါလိမ့် လို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့ ဦး...ရေးတော့အမှန်..ဖတ်တော့ အသံလို့ ဆိုစကားရှိတယ်မဟုတ်လား...။
ဒီလို... လူဆိုတာက မှားတတ်ပါတယ်..မှားနေတာကို အမှန်သိတဲ့ လူက ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ ရင် ပြင်သင့်တယ် မဟုတ်လား..။
ပြောတဲ့ လူက ပြောပေမယ့် ပြုလုပ်ပြောဆိုသူက မပြင်ရင်တော့...တမျိုးကြီးပေါ့။
မနေ့ က Burmese classic ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုမှာ မနီနီဝင်းရွှေသီချင်းသိဆိုမှုကို နားထောင် ခံစားမိတယ်..။
မှတ်မှတ်ယယ နီနီဝင်းရွှေကို မန္တလေးက ဦးဘသိန်းရေးပေးတဲ့ “ ကိုယ်လိုချင်သောပန်း” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ သူအနုပညာကိုတော်တော်လေး လေးစားစွဲလန်းခဲ့ ဘူးပါတယ်.။
ထို့ အတူဘဲ မေ့ကွက်ကိုရှာ..သီချင်းကိုလဲ ကြိုက်ခဲ့ တာဘဲ..။
ညက နားထောင်ပြီး မနက်၆ နာရီ အလုပ်မသွားခင် အိမ်မှာ ကော်ဖီသောက်ရင်းနဲ့ ရခိုင်မှာ ကခဲ့ တုန်းက အတွေ့ အကြုံလေးကို တွေးရင်း ရယ်မိတယ်..ပြီးတော့ မဒမ်ဆူးကိုပါပြောပြပြီး ၂ယောက်သား ထပ်ရယ်မိပြန်ရော...။
ကျနော် ရခိုင်က ဦးကျော်နုဖြူဇာတ်မှာ ၁နှစ်ကတော့ သူ့ ချွေးမက ရှိုးဆိုတယ်...မြန်မာသံအစီအစဉ်မှာ သူက ၀င်ဆိုတာပါ..
အဲဒီတုန်းက အဆိုတော်လွှမ်းမိုးရဲ့ ပွဲကြိုက်ခင် စီးရီးက ရခိုင်အထိအောင်ကို ပေါက်တာ..။
ဒီသူငယ်ချင်းမက မြန်မာသံအစီအစဉ်မှာ ၀င်ဆိုရင်း ..
“အခု ကျမသီဆိုမယ့် တေးသီချင်းကတော့ “ မောင့်ဂွက်ကိုရှာ” ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့..။
ကိုယ်ကလဲ မကြားဘူးတော့ နားထောင်နေတာပေါ့...ဆိုမယ့်ဆိုတော့....မေ့ ကွက်ကိုရှာ သီချင်းဖြစ်နေရော...။
သူပြန်ဆင်းလာတော့ သူ့ ယောကျာင်္းကိုရော သူ့ ကိုရော ပြောပြရတာပေါ့..စာသားမှားနေတယ်..
မေ့ ကွက်ကိုရှာ လို့ ဘဲ ဆိုရမယ်ဆိုတော့ သူတို့ လင်မယားက အတင်းကိုငြင်းတော့တာဘဲ..။
လွှမ်းမိုးခွေကိုတောင် ကက်ဆက်နဲ့ ဖွင့်ပြလိုက်သေးတယ်...။
“တွေ့ လား....လွှမ်းမိုး ကယောင်္ကျားအနေနဲ့ဆိုတော့ သူ့ ချစ်သူကိုမေ လို့ သုံးတယ်... သံစဉ်နဲ့ ဆိုတော့ မေ့ကွက်ကိုရှာဖြစ်တာပေါ့...အခု
ကျနော့်မိန်းမဆိုတော့ မိန်းကလေးက သူ့ ချစ်သူကို မောင်လို့ သုံး၇မှာလေ..”
ခက်ပြီ...သီချင်းထဲက မေ့ ကွက်ကိုရှာဆိုတာ မောင်နဲ့ မယ်( မေ)ကိုဖော်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး..မေ့ ပျောက်နေတာ မေ့ သွားတာ ..မေ့ နေတာ...မေ့ ပစ်ဘို့ အကွက်ရှာ တာ...ဒါကိုတင်စားတာပါလို့ ပြောတော့ သူတို့ လင်မယားက သူတို့ အဖေဇာတ်ဆရာကိုပါခေါ်လာပြီး ငြင်းတော့တာဘဲဗျာ...။
ကိုယ်လဲ ပြောမရတဲ့ အဆုံး...ကဲ...နင်ဆိုချင်သလိုသာဆိုဟာလို့ ပြောုပီး လက်လွှတ်လိုက်တာပေါ့..။
ကိုယ်က ပြောပြရင်းတီးခေါက်ပြောဆိုကြည့်တော့ လင်မယား၂ယောက်လုံးက အတန်းပညာ ဘာမှမရှိသလောက်ဘဲ...သူ ဆိုမယ့်သီိချင်းကို သူ့ ယောင်္ကျားကဖတ်ပြီး နူတ်တိုက်ချပေး..သို့ မဟုတ် ကက်ဆက်နားထောင်ပြီိး ကျက်ရတာကိုး..။
ဘာဘဲပြောပြောသူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ဇာတ်ကတော့ ဟုတ်နေတာဘဲ.။
ရခိုင်တွေကလဲ မြန်မာသံကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ဆုငွေတွေကလဲ ကျပါတယ်..။
သူကလဲ ဆိုမှဆို ...ဆုကျလေဆိုလေ..ကျနော်ထင်တယ် ဆုချတဲ့ သူတွေကလဲ သေချာနားထောင်ပုံမရပါဘူး..။
သူကလဲ တခါတခါဆို ...၁ညမှာ ၂ပြန်လောက်ကို မောင့် ဂွက်ပစ်တာ...။
အဲဒီနှစ်က ဇာတ်ရာသီ တချိန်လုံး ဒီသူငယ်ချင်းမ မောင့်ဂွက်နေတာဗျာ....
မှားနေတာမှန်းသိနေတဲ့ ကိုယ့်မှာ...” အခု ကျမဖြေဖျော်ပေးမယ့် မြန်မာသံ တေးသီချင်းလေးကတော့.....ဆိုတာနဲ့ နားစိတ်ညစ်တော့တာဘဲ...။
မှားနေပါတယ်လို့ ပြောပြတာကိုလဲ လက်မခံဘူး... အမှားကိုလဲ ၀န်မခံရဲဘူး
အမှားကိုပြင်ဘို့ လဲ အသိဥာဏ်မရှိဘူး
ဒီကလေးမ မှားပေမယ့် ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ် အနည်းငယ်လောက်ကိုဘဲ စိတ်ညစ်စေတာ..။
ညနေ ၃း၃၀မှာအလုပ်ကပြန်လာတော့ နီနီဝင်းရွှေ သီချင်းကိုပြန်နားထောင်ရင်း မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတာ...
ကျောက်စိမ်းအိမ်တော်ကြီးထဲမှာ ဗိုလ်သန်းရွှေက သီချင်းတပိုဒ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါ အော်ဆိုနေတာဗျာ...အောက်ကလိအာသံကြီးနဲ့ ..
“ မောင့်ဂွက်ကို...ရှာသူရေ..............” တဲ့ ။
ဒီလူကြီးကို ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်များ စာသားအမှားတွေ နုတ်တိုက်ချပေးထားတာလားလို့ ။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 10:11 AM 8 comments:
“၉၇”ပါးရောဂါ ဆိုတဲ့ အမည်လေးနဲ့ မန္တလေးသိန်းဇော်( ကို) ဇာတ်ပွဲမှာ ပြဇာတ်တွေရေးခဲ့ ဘူးတဲ့ဆရာဝင်းစည်သူက
၀တ္တုတိုလေးတစ်ပုဒ်ရေးဘူးတယ်..။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကို ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ ဘူးတဲ့ လုံးစိမ်း( ဇာတ်စကားပါ..အဓိပ္ပါယ်က ဇာတ်ထဲစရောက်ပြီး ပိုးဝင်ကာစ သိပ်ကို ကချင်နေတဲ့ အနူပညာ ဘောက်ဖတ်လေးတွေ ၊ပိုးတုံးလုံးလေးတွေကို ခေါ်တာပါ)
ဘ၀လေးကို ပြန်တွေးပြီးအူထဲမှာ တခွိခွိနေအောင် ရယ်မိတဲ့ဝတ္တုလေးပါ...။
အနုပညာပိုးဝင်သွားပြီးရင် ကုသဘို့ ထုံး မရှိလို့၉၆ပါးရောဂါအပြင် ရောဂါသစ်တခုအနေနဲ့ ဆရာက တင်စားပြိးရေးခဲ့ တာပါ..။ မူရင်းဝတ္တုကို ၁၀ခါကျော်အောင်ပြန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..မူရင်းကတော့ ရှာလို့ မတွေ့ ပါ..ရရင်တော့ ပေးဖတ်ချင်ပါတယ်..။
အခု ၉၇ပါးရောဂါသည်လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ကျနော်ကတော့ ၉၇ပါးကျော်ပြီး ၁၀၀တောင် ပြည့်ချင်ချင်ဖြစ်နေလို့နားနေပါဦးမယ်..။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:43 AM5comments:
နှစ်သစ်ကူးအမှတ်တယ အနေနဲ့ တော့ photoshpo cs2 နဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ရာ ပုံလေး တစ်ပုံတော့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်...။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 7:00 AM5comments: